DEG-DEG: Victor Lindelof Oo Shaqo Naf Huris Ah Sameeyay, Man United Iyo Booliiska Oo War Soo Saaray. - Gool24.Net
DEG-DEG: Victor Lindelof Oo Shaqo Naf Huris Ah Sameeyay, Man United Iyo Booliiska Oo War Soo Saaray.
Difaaca kooxda Manchester United iyo xulka qaranka Sweden ee Victor Lindelof ayaa sameeyay arin naf huris ah laakiin waxa uu halis wayn galiyay naftiisa si uu hooyo waayeel ah u badbaadiyo.
Victor Lindelof ayaa sameeyay arin layaableh kadib markii uu arkay tuug isku dayay in uu xatooyo ku sameeyo hooyo waayeel ah wuxuuna sameeyay go’aan qaadasho cajiib ah kadib markii uu qabtay tuugii ilaa intii ay booliisku ka soo gaadhayeen.
War hadda la helay ayaa shaaciyay in Lindelof iyo xaaskiisa Maja oo fasax ku wada jiraa dalka Sweden ay arkeen tuug baaskiil watay oo hooyo 90 sano jir ah ka xoogay boorso ay sidatay uu qaatay go’aanka uu naf hurista ku sameeyay.
Sida lagu xaqiijiyay warbaahinta Sportbladet, Victor Lindelof ayaa baacsaday tuuga boorsada ka xoogay islaanta waayeelka ah wuxuuna awooday in uu soo qabto isla markaana uu ka soo qaaday boorsadii laakiin waxaa layaab noqotay in uu tuugan u diiday in uu baxsado oo uu xejiyay ilaa intii uu booliisku soo gaadhayay.
War rasmi ah oo ka soo baxay booliiska Sweden oo dhacdada Lindelof la xidhiidha ayaa lagu yidhi: “Waxa uu booliisku u mahad celinayaa markhaatiga dareenkii iyo deg degii uu ku dhex galay si uu u soo celiyo hantiidii la dhacay”.
Afhayeenka booliiska oo dhacdadan sharaxaya ayaa yidhi: “Nin saarnaa baaskiil ayaa islaan ku jirta 90 sano jirkeedii waxa uu ka boobay boorsadeeda Central Vasteras dhexdeeda. Waxaa yimid Victor Lindelof si uu u badbaadiyo, ciyaartoyga kubbada cagtu wuu eryaday oo uu baacsaday kadib waxa uu qabtay oo uu hayay tuuga ilaa intii ay booliisku soo gaadhayeen”.
Afhayeen u hadlay Man United ayaa yidhi: ” Isagu waxa uu baacsaday tuuga, waxa uu dib u soo celiyay baaga ama boorsada isaga oo aan wax rabshad ah adeegsan”.
Afhayeenka Man United oo shaqada uu Victor Lindelof qabtay iyo waxa uu xidiga reer Sweden ka aaminsan yahay arintan ayaa yidhi: “Victor waxa uu aaminsan yahay in waxa kaliya ee uu sameeyay ay tahay wixii uu qof kastaaba samayn lahaa xaaladaas”.
Lindelof ayaa amaan badan ku helay arinta bini aadamnimada ah ee uu sameeyay islaanta la sheegay in ay ku jirtay da’da 90 sano jirka laakiin waxa uu ceeb u soo jiiday saaxiibkiisa Man United ee Harry Maguire kaas oo todobaadkii la soo dhaafay dhawr habeen xabsiga ku qaatay markii uu rabshado ku lug yeeshay.